Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives nwere mmeri na-eduga ebe ezumike niile na 2019 SATA Awards
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives nwere mmeri na-eduga ebe ezumike niile na 2019 SATA Awards
Awards • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ Maldives na -agbasa • News • Akụkọ Sri Lanka • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Chamika De Silva, Director nke Ahịa Centara Ceysands Resort na Spa (nke atọ site n'aka ekpe) natara onyinye ahụ n'aha Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives na SATA Awards 3.
Ndị okenye Centara - naanị 5-kpakpando Maldives na-enweta nsọpụrụ kachasị elu gafee mba isii ndị SATA
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives aha ya Na-eduga ebe ezumike niile na South Asia Travel Association nke Afọ nke Afọ - Onyinye SATA 2019. A mara ọkwa ndị mmeri na emume mgbede gala nke emere na nso nso a na Galle, Sri Lanka.
Onyinye SATA nke afọ a gosipụtara ihe karịrị nhọpụta 700 gafee ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọbịa, gụnyere ụlọ ọrụ ndị njem, ụlọ nkwari akụ, ndị na-eme njem, na ndị na-ahụ maka ọrụ dị na mba SATA isii, bụ Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal na Sri Lanka. A na-ekpebisi ndị mmeri SATA site na ngwakọta nke ụlọ ọrụ na ngalaba ndị ọgbọ na-ekpe ikpe, ịtụ vootu site na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ njem, yana ntuli aka nke ndị na-azụ ahịa na ntanetị.
Nke a bụ afọ nke abụọ sochiri Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ka SATA sọpụrụ. Na onyinye 2018 SATA, ebe ezumike nwetara ugwu ugwu maka Leading F&B Resort.
Centara Hotels & Resorts bụ onye ndu ndị na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ na Thailand. Njirimara ya 76 metụtara isi obodo Thai niile gụnyere Maldives, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Myanmar, China, Japan, Oman, Qatar, Cambodia, Turkey, Indonesia na UAE. Pọtụfoliyo Centara nwere akara isii -Centara Grand Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts, Centara Boutique Collection, Centra nke Centara, Centara Residences & Suites na COSI Hotels - sitere na 5-kpakpando obodo hotels na okomoko agwaetiti returss ka ezinụlọ ntụrụndụ na ọnụ ndụ. echiche nke teknụzụ ohuru na-akwado. Ọ na-arụkwa ọrụ maka ebe a na-eme mgbakọ nke oge a ma nwee akara ngosi mmeri nke Cenvaree. N'ime mkpokọta a, Centara na-anabata ma na-agbaso ile ọbịa na ụkpụrụ Thailand ama ama maka gụnyere ọrụ amara, nri pụrụ iche, pampering spa na mkpa ezinụlọ dị. Ọdịbendị pụrụ iche nke Centara na ụdị dị iche iche dị iche iche na-enye ya ohere ijere ndị njem afọ niile na ibi ndụ ọ bụla afọ.
Centara na-agbasawanye pọtụfoliyo ya na njirimara ndị ọzọ na Thailand na ahịa mba ụwa ọhụrụ, ebe ọ na-agbasa akara ukwu ya na kọntinenti ọhụrụ na niche ahịa. Ka Centara na-aga n'ihu na-agbasawanye, ntọala na-eto eto nke ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ga-ahụ ụdị ụlọ ọbịa pụrụ iche nke ụlọ ọrụ ahụ n'ọtụtụ ebe. Mmemme iguzosi ike n'ihe zuru ụwa ọnụ nke Centara, Centara The1, na-eme ka iguzosi ike n'ihe ha sie ike site na iji ụgwọ ọrụ, ikike na ọnụahịa ndị otu pụrụ iche.
Chọpụta ihe banyere Centara na CentaraHotelsResorts.com.
Centara okomoko ntụrụndụ